ဦးအောင်ကြည်ညွန့် | အမျိုးသားလွှတ်တော်
၂။ အမည် - ဦးအောင်ကြည်ညွန့်
၅။ နိုင်ငံသား စိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် - ၁၀/ခဆန(နိုင်)၀၀၃၁၁၆
၆။ မွေးသက္ကရာဇ် / အသက် - ၀၈-၀၉-၁၉၅၁ / (၆၇) နှစ်
၇။ မွေးဖွားရာဇာတိ - တပ်ကုန်းမြို့
၈။ ပညာအရည်အချင်း - B.Ag.,H.G.P
၁၀။ အဘအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - ဦးတင်မြင့်(ကွယ်လွန်)
၁၁။ အမိအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - ဒေါ်သန်းရင်(ကွယ်လွန်)
၁၂။ ဇနီး(သို့) ခင်ပွန်းအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - ဒေါ်လဲ့လဲ့စန်း၊ ၁၀/ခဆန(နိုင်)၀၀၂၅၅၂၊ အ.လ.ပြ (ငြိမ်း)
၁၃။ သား / သမီးအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - (၁) မောင်မြတ်သာဦး၊ ၁၀/ ခဆန(နိုင်) ၀၆၇၇၀၉၊ အရောင်းအဝယ် (၂) မခိုင်ဆွေသင်း၊၁၀/ခဆန(နိုင်) ၀၀၀၅၆၈၊ ဒုဥက္ကဋ္ဌ၊ မိဘများ၏ပညာရေးထောက်ပံ့မှုဖောင်ဒေးရှင်း၊ မြောက်ဒဂုံ၊ ရန်ကုန် (၃) မရည်မွန်သန့်၊ ၁၀/ ခဆန(နိုင်) ၀၀၀၅၆၉၊ Executive Director. Sweet Smile Travels & Tours Co.,Ltd. Yangon. (၄) မခိုင်ဇာလင်း၊ ၁၂/ဒဂမ(နိုင်) ၀၁၄၃၂၉၊Project Adviser, Action Aid,Philippines. (၅) မဖြူစင်သန့်၊ ၁၂/ဒဂမ(နိုင်) ၀၁၆၂၆၅၊ အထက်တန်းရှေ့နေ၊ ရန်ကုန်မြို့ (၆) မမြသက်နွယ်၊ ၁၂/ဒဂမ(နိုင်) ၀၁၆၆၉၃ ၊ Program Manager, BBC. Yangon
၁၄။ အမြဲတမ်း နေရပ်လိပ်စာ - ၁၁၁၊ ကန်သာယာလမ်း၊ မောင်းတိုင်(၁)ရပ်ကွက်၊ တောင်တွင်းကြီးမြို့
၁၉၅၈ မှ ၁၉၆၂ ထိ အ.မ.က(၁)တပ်ကုန်းမြို့မှ မူလတန်းပညာ စတုတ္ထတန်း အောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၆၂ မှ ၁၉၆၆ ထိ အ.ထ.က တပ်ကုန်းမြို့မှ အလယ်တန်းပညာ အဋ္ဌမတန်း အောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၆၆ မှ ၁၉၆၉ ထိ အ.ထ.က (၁၄) မန္တလေးမြို့ အထက်တန်းပညာ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းကို ၁၉၆၉ မှ ၁၉၇၅ ထိ မန္တလေးစိုက်ပျိုးတက္ကသိုလ်မှ စိုက်ပျိုးရေးပညာဘွဲ့ (B.Ag) ရရှိခဲ့ပါသည်။ ၁၉၇၃ ခုနှစ် စိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်မှ ဒုတိယနှစ် အောင်မြင်ပြီးချိန်တွင် အထက်တန်းရှေ့နေစာမေးပွဲဝင်ရောက်ဖြေဆို အောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။
၁၉၇၅ခုနှစ်တွင် ကိုယ်ပိုင်ယာထွက်သီးနှံစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သည်။ ၁၉၇၆မှ ၁၉၇၇ထိ အထက်တန်းရှေ့နေ၊ ဥပဒေသင်တန်းနှင့် အလင်းရောင်နည်းပြသင်တန်းတွင် သင်္ချာဘာသာရပ်ကို တပ်ကုန်းမြို့တွင် လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ၁၉၇၇ မှ ၁၉၉၂ ထိ အထက်တန်းရှေ့နေအဖြစ် ချောင်းဆုံမြို့နယ်၊ ဘီလူးကျွန်း၊ မွန်ပြည်နယ်တွင် လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၃ မှ ၂၀၀၆ ထိ ရန်ကုန်မြို့သို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ပြီး အရောင်းအဝယ်နှင့်အိမ်တွင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၆မှ၂၀၀၉ ထိ သာသနာ့ဘောင်သို့ ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၉ မှ ၂၀၁၂ ထိ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် တာဝန်များ ဆက်လက်ထမ်းဆောင်ပါသည်။
၁၉၈၅ မှ ၁၉၈၈ ထိ ချောင်းဆုံမြို့နယ်၊ မူလတန်းနှင့်အထက်တန်းကျောင်း မိဘဆရာအသင်းအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ မြို့နယ်ပဋ္ဌာန်း အတွင်းရေးမှူးနှင့် ချောင်းဆုံမြို့နယ်၊ ရွှေမြင်‌့မိုရ်တောင်စေတီတော် ဂေါပက ဒု-ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၁၉၈၈ ခုနှစ် ဒီမိုကရေစီအရေးအခင်းတွင် ချောင်းဆုံမြို့နယ် သပိတ်ခေါင်းဆောင်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ အရေးအခင်းပြီးနောက် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ချောင်းဆုံမြို့နယ်စတင်တည်ထောင်ပြီး စည်းရုံးရေးမှူး၊ အတွင်ရေးမှူး၊ ဥက္ကဋ္ဌ တာဝန် အဆင့်ဆင့်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၀ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ချောင်းဆုံမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်(၁)မှ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ကိုယ်စားပြုရွေးချယ်ခံခဲ့ရသည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၄)၊ မှ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် အမျိုးသားဒီမုိကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ကိုယ်စားပြုရွေးချယ်ခံခဲ့ရပြီး လက်ရှိကာလအထိ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည်။
၁၉၉၀ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့မှ ၁၉၉၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁၁ ရက်နေ့အထိပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေပိုဒ်မ ၄၃၆/၁၀၉ ဖြင့် ထောင်ဒဏ်(၂) နှစ် ကျခံရပါသည်။
Contact to ဦးအောင်ကြည်ညွန့်
အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီသို့ အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်မှ တာဝန်ရှိသူများကမြန်မာနိုင်ငံတွင် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အထောက်အကူပေးရေးဆိုင်ရာစီမံကိန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လာရောက်တွေ့ဆုံ